Iwe unoshuvira kuverenga huwandu hwesimba remwana here? Tinogona kukubatsira
Dhivhosi Mutemo » Tsigiro Yemwana
Iwe nemumwe wako wawakamboroora naye une vana pamwe here? Ipapo rubatsiro rwemwana chikamu chakakosha chezvibvumirano zvemari zvinofanirwa kuitwa panguva yekurambana. Kumiririra kwevana ndiyo hure hunowanikwa nemubereki asiri iye wekuchengeta uye kurera kwevana.
UNODAI KUTI URI VANA VABATSIRE KUSVIRA CALCULATION?
> Chikamu chetsigiro yemwana
> Kuverenga tsigiro yemwana
> Kuchinja kutsigirwa kwemwana
Chikamu chetsigiro yemwana
Mukubvunzana, iwe nemumwe wako wawakambobatsirana naye munogona kubvumirana pahuwandu hwemabhonzo emwana. Zvibvumirano izvi zvinozoiswa pasi muchirongwa chekurera. Kana iwe usingakwanise kuuya muchibvumirano pamwe, mumwe we magweta edu achafara kukubatsira. Tinogona kubatsira nenhaurirano yekuita, kuona huwandu hweakamony yemwana kwauri uye kugadzira chirongwa chekurera. Isu tinobata kutsunga kwekutsigirwa kwemwana nekugadzira kuverenga kwekuchengetedza.
Mutongi haangotarise chete mamiriro emari yemunhu anotsigira anogamuchira, asiwo pamamiriro emari emwana anobony mari. Nehwaro hwemamiriro ezvinhu ese ari maviri, dare rinobva rataridza huwandu hwenyasha dzemwana.
Mukuda gweta rekurambana?
Kurambana inguva yakaoma. Isu tinokubatsira iwe kuburikidza nemaitiro ese
Isu tine maitiro edu uye tinoshanda pamwe chete newe kusvika kune yakakodzera mhinduro
Uri kuenda kubhadhara kana kugamuchira alimony? Uye zvakadii? Isu tinokutungamira uye nekubatsira iwe neizvi
Iwe unoda kurarama wakaparadzana? Isu tinokubatsira
Kuverenga tsigiro yemwana
Kuverengerwa kwekuchengetedza iko kuverenga kwakaoma kunzwisisa sezvo zvinhu zvakawanda zvichitarisirwa kuti zvijikanwe. Law & More will be happy to carry out the maintenance calculation for you.
Chekutanga pane zvese, izvo zvinodikanwa zvevana zvinofanirwa kuve zvinotsanangurwa. Izvo zvinoenderana nemabatiro sezvavaingoita vasati varambana. Kana paine zvakakosha mitengo, senge chikoro chenyika kana kuchengetwa kwevana, mitengo yacho inogona kukwidziridzwa saizvozvo.
Kuongorora kugona kwemari
Kana izvo zvinodiwa nevana zvave zvichinge zvatsanangurwa, chiyero chinotakura mutoro chinoverengerwa mapato ese. Kuverenga uku kunoona kana munhu ane mhosva yekuchengeta aine zvakakwana mari mari kuti akwanise kubhadhara alimony. Kuti uzive huwandu hwemari hwemunhu anofanira kubhadhara alimony, mari yaanotambira inofanira kutanga yatemerwa. Pension yemwana mari yekutanga, uchifunga zvese zvinowanikwa mari, senge mubhadharo, mubairo uye bhajeti remwana rakasungirwa.
Mubereki anofanira kubhadhara alimony uye zvakare anosangana nevana anowana zvakare mari yekuchengeta vana. Izvi zvinosanganisira mutengo wekutenga, kutyaira uchidzokera shure. Muchokwadi, chikamu chakati chemitengo chinosanganisirwa mukuverenga
Kuwanda kwepesenti kunoenderana nehuwandu hwe mazuva ekushanya pavhiki. Mubereki ane paavhareji zuva rimwe chete pasvondo anotarisira mwana mari, anowana semuenzaniso 15% chengetedzo yekuriritira uye mubereki anotarisira mwana mazuva matatu pavhiki anowana makumi matatu neshanu kubva muzana.
Kutakura kugona kufananidzira
Nhanho yekupedzisira yekuverenga iyo urefu hwetsigiro yemwana ndeyokuita mutoro unobereka equation. Mune iyi equation, mari yevana yakakamurwa pakati pako newawakarambana naye zvichienderana nenzira yavo yekutsigira. Kugona kwemunhu kodzero yekuchengetedza kunoenzaniswa nekugona kwemunhu ane mutoro wekubhadhara kuchengetedza. Mushure meizvozvo, chero mutero wekutarisira unozoshandiswa uye unogadziriswa panenge pakakodzera. Chikero chekutsigira chinonyanya kuve chekutsigirwa kwemwana. Kana kuchine nzvimbo mushure meizvozvo, mutongi anokwanisawo kuona weti yekudyidzana naye mumony.
Would you like to know how your financial situation will look after your divorce? Please contact Law & More and together we can determine how much child support you have to pay or receive.
Kuchinja kutsigirwa kwemwana
Kana zvisingaite kuchinja mwana emamony mukubvunzana newawakambofambidzana naye, tinogona kuendesa chikumbiro chekuti uchinjwe mudare. Tinogona kuita izvi kana paine mamiriro ezvinhu akachinja kana, maererano newe, dare rakatemera kuchengetedza iri rekutanga kadhi pane hweruzivo rusina kukwana kana rwusina kukwana.
Iwe unogona kufunga nezvemamiriro anotevera, semuenzaniso:
• kudzinga kana kusashanda
• kubviswa kwevana
• basa idzva kana rakasiyana
• kuroora kana kuroorwazve, kuroora kana kupinda mubatanidzwa wakanyoreswa
• shanduko yegadziriro yekuonana
Wobva watibata nefoni +31 40 369 06 80 kana titumire e-mail: